M/ Faroole oo sheegay in DF aysan kaligeed go’aan ka gaari-karin qadiyadda Somaliland. (Dhagayso Warbixin) – Radio Daljir
M/ Faroole oo sheegay in DF aysan kaligeed go’aan ka gaari-karin qadiyadda Somaliland. (Dhagayso Warbixin)
Agoosto 2, 2013 12:23 b 0
Garowe, August, 02, 2013 ?- Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr C/raxmaan Sh. Maxamed Maxamuud ?Faroole? ayaa xalay munaasabadii lagu xusay 15-sano guuradii kasoo wareegtay aas-aaskii dawlada Puntland waxaa uu ka jeediyay khudbad dheer oo qaadatay 60-daqiiqo.
Madaxwayne C/raxmaan Faroole ayaa khudbadiisa oo uu ukala dhigay mid mid ayuu horayntii waxaa uu kusoo qaaday arrimo kale duwan oo ay ka midyihiin ahmiyadda 1-da August ay? u leedahay Puntlnad, waxqabadka xukuumaddiisa intii ay shaqaynaysay, ammaanka guud ee Puntland,? go?aanka xukuumadda ee hannaanka doorashooyinka baarlamaaniga ah ee soo socota, qorshaha xukuumadda ee hannaankii geeddisocodka dimuqraadiyadda Puntland, rabshadii ka dhacay Qardho Iyo Gaalkacyo? 14-kii June, xaaladda dhaqaale ee Puntland, dirirta inta badan dhexmarta qabaa?illada Puntland, martigalinta barakacyaasha iyo doorka xukuumadda, waxsoosaarka khayraadka Puntland, Rajadii lasoo bixida shidaalka Puntland,? Xiriirka beesha caalamka ee Puntland, mashaariicda hormarineed ee ka socda Puntland, Mawqifka dawladda ee la xiriira muranka Dastuurka Soomaaliya, Wadaxaajoodka Soomaaliya iyo Somaliland, Shirka Dhaqaale arruurinta Soomaaliya ee Buruusilis, iyo xaqabadaha ka taagan Puntland.
Madaxwayne C/raxmaan Sh. Maxamed Maxamuud ?Faroole? ayaa qaybihii ugu horaysay ee khudbadiisa kusoo qaaday waxqabadka hay?adaha dawladda Puntlnad, waxaana uu sheegay inaan lasoo koobi Karin waxyaabihii ay Puntland ka qabteen 18-ka wasaaradood ee uu odayga u yahay.
Dr Faroole, ayaa si qoto dheer uga sheekeeyay marxaladihii adkaa ee geeddisocodka dimuqraadiyadda Puntland oo uu tilmaamay inay ka mid ahayd ballanqaadyadii dawladdiisu ay ku kasbatay codka golaha shacabka Puntland, waxaana uu hadalkiisa raaciyay mudadii geeddisocodka dimuqraadiyaddu ay socotay iyo hawlihii ay qabteen oo uu madaxwayne Faroole tusaale u soo qaatay dhammaystirkii iyo ansixintii Dastuurka Puntland, samayntii guddiga Doorashooyinka, ansixintii xeerka doorashooyinka, iyo wacyigalintii ballaarnayd ee shacabka Puntland loogu baraarujinayay fahanka hannaanka dimuqraadiyadda iyo habka loo waajaho.
Madaxwayne C/raxmaan Faroole ayaa mar uu ka hadlayay rabshadii ka dhacay Puntland 14-kii June waxaa uu yiri waxaa uu eedayn cad u jeediyay madaxwaynahihii hore ee Puntland General Maxamuud Muuse Xirsi Cadde? Muuse?, waxaana uu foolxumo ku tilmaamay aabulka dagaalkii Qardho oo uu Cadde ku eedeeyay madaxwayne Faroole.
Madaxwaynaha Puntland ayaa sidoo kale waxaa uu caddeeyay go?aanka xukuumaddiisa eeku aadan sii socoshada hannaankii la joojiyay ee geeddisocodka dimuqaaradiyadda Puntlnad, waxaana uu yiri ?Dimuqraadiyaddu intaas kuma ekaanayso, doorashada tan xigtana waxay noqon-doontaa mid dimuqraaddi ah?.
Madaxwaynuhu waxaa uu si adag uga hadlayay oo khudbadiisa marar badan kusoo qaaday arrimaha ammaanka Puntland oo uu tilmaamay in siyaasadda dawladiisu ay siiyaya ahmiyad gaar ah, dhaqaalaha ugu badana ay ku bixiyaan sidii shacbiga Puntland u heli-lahaayeen nabad ay ku naaloodaan.
Madaxwayne Dr Faroole oo hadalkiisa siiwata isagoo ka hadlaya ammaanka ayuu caqabad aad u daran ku tilmaamay dagaallada inta badan dhexmara qabaa?illada Puntland qaar-kood.
Dr C/raxmaan waxaa uu soo hadal-qaaday dhibaatooyinka dhaqaale ee Puntland, waxaana uu mas?uuliyadda dib udhaca dhaqaale uu dhusha uga tuuray DF, inkastoo uu Somaliland ku ammaanay daabacashada lacagta SH. Soomaaliya.
Maalgashiga? dawladaha aduunka ee Puntland, xaaladda dhaqaalaha, shirka Burusilis, iyo ka faa?idaysiga waxsoosaarka dhulka? Puntland ayaa madaxwayne C/raxmaan Faroole waxaa uu ku dheeraaday arrimaha uga qorshaysan, waxaana isagoo hadalkiisa siiwata uu sheegay inay jiraan ka faa?iidaysi badan oo la xiriira dhanka khayraadka dabiiciga ah, iyo dawladdo shisheeye oo Puntland ka caawinaya dhanka maalgashiga deegaanka, isagoo tusaale usoo qaatay dawladaha Kuwait iyo Italy.
Madawyanaha dawladda Puntland Dr Faroole waxaa uu ammaan iyo boogaadin u jeediyay dawladdaha Kuwayd iyo Talyaanniga oo uu sheegay inay ka caawiyeen mashaariic hormarineed oo Puntland ay ugu deeqeen, waxaana uu tusaale usoo qaatay hirgalinta mashruuc lagu dhisayo garoomo caalami ah 3-da magaalo eek ala ah Gaalkacyo, Garowe, Iyo Boosaaso.
Madaxwayne C/raxmaan Faroole waxaa shaaciyay go?aanka xukuumaddiisa ee ku waajahan dawladda dhexe ee Soomaaliya habdhaqankeeda Puntland sida ay u aragto, iyo go?aanka Dastuurka Soomaaliya ay Puntland ka qaadatay, waxaana isagoo hadalkiisa sii wata uu yiri? ?Puntland iyo DF iskuma mehersana haddii laga leexdo Dastuurka Soomaaliya?
Madaxwaynuhu waxaa uu ammaanay barnaamijkii aduunka uu Soomaaliya kula macaamili jiray ee Dhuwal Taraaaga, waxaana uu kaas ku tilmaamay hannaan xaqsoor ah tilmaamayana sida ay Soomaalidu wax u kala leeyihiin.
Madaxwayne C/raxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa qaybihii ugu dambeysay khudbadiisa waxaa uu kusoo qaaday wadaxaajoodyada u dhaxeeya Soomalialnd iyo Soomaaliya. Waxaana uu sheegay Puntland inay doorwayn ku leedahay wadaxaajoodkaasi, oo aysan DF go?aan ka gaari Karin rabitaanka Somaliland.
Khudbada madaxwayne C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa kusoo beegmaysa xilli gobollada Puntlnad looga diyaar-garoobayo doorashooyinka baarlamaaniga ah ee Puntland 8-January 2014 ka dhici-doona Puntland, waxaana jira murashaxiin magac ku leh Soomaaliya oo xilligaan ku haminaya hoggaanka Puntland.
Sawirada sida Garowe looga xusay 1-da Augusto. (Daawo+dhagayso)
Baahin: Khamiis 1- August -2013, Caawa Iyo Daljir, Weriye Khadar Cawl Ismaaciil ~ Daljir ~ Buhodle